Omaly tolakandro no niseho ny loza ary tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany no tonga teny amin’ny hopitaly Hjra ity zandary niharan-doza.
« Avy nanao fanazaran-tena tamin’iny lalam-pirenena voalohany iny izahay. Niala fiara mpitatitra nijanona io namany io dia nifatratra tany an-tanimbary. Tsy mbola fantatra izay voa aminy aloha hatreto fa izy tsy mahatsiaro tena io », hoy ireo zandary mpitondra bemôtô naman’ity niharan-doza ity.
Nivoaka rà ny orony sy ny sofiny roa. 15 na 20 mn nahatongavany tao amin’ny hopitaly dia tsy mbola noesorina ilay aroloha fotsy nanaovany. Noesorina avokoa ny akanjo sy izay nanelingelina tamin’ny famonjena. Minitra vitsy taorian’izay dia vory avokoa ireo dokotera mpamelona aina tao amin’ny hopitaly Hjra nandray an-tànana ity zandary ity.
Taorian’ny fizahana azy teny amin’ny Hjra dia nafindra eny amin’ny hopitaly Soavinandriana izy. « Handalo fizahana amin’ny « scanner » izy eny no sady amin’ny maha miaramila azy dia eny ihany koa no hanarahany fitsaboana », hoy ireo mpitsabo teny amin’ny Hjra. Tsy niova anefa ny toe-batany fa mbola tsy nahatsiaro tena ihany. Araka ny voalazan’ireo nahita azy dia voa mafy ity zandary ity ary atahorana mihitsy ny ainy.